Gaaffii Siyaasaa Oromoof Wayyu: Walabummaa Oromiyaa -
“Walabumma Oromiyaaf qabsaa’uun, yoo xinnaate, faaydaalee gud-guddoo sadii qaba. isaanis, (a) Yeroo qabsoon keessa tokkummaa nuu kenna; (b) Oromoon qabeenyasaa osoo alagaaf hin qoodin ittiin biyyasaa misoomsuu danda’a; (c) Oromiyaan walaboome fi sirnna gadaan buluu Gaanfa Afrikaaf, Habashoota dabalatee, fakkeenya gaarii ta’a.”
“Kanneen qabsoon kanatti du’aa jiran hoo “ni dadhabne” hin jennee; “Oromiyaa walaboomsuun hin danda’amu” hin jenne; “wareegamatu nutti baayyate” hin jennee; “Itoophiyaa hundaaf haadha taate barbaanna” hin jenne. Kanneen qabsoo kana fagoo irraa daawwatan maaliif wareegamin walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromoof kafalamu itti ulfaatee?”
Barruun kun gaaffii Obbo Berhanu Hundee “Oromiyaa walaboomtu moo Federeeshinii Dhugaa: Galii siyaasaa isa kamtu Oromoof wayya?” dhiheessanii irratti yaada keennachuuf dhihaate.
Hunda dura, Obbo biraanuun rakkoo hamma arbbaa gahu, kan Oromoonni hedduun osoo arganii tuquu sodaatanii taa’anitti quba qabuu fi yaada ifaa irratti kennachuusaaniif hedduun isaan galateffadha.
Obbo Berhanuun garasaaniitiin: (a) Itoophiyaan impaayera ta’uu; (b) furmaatin rakkoo bityyattii hiree murteffannoo ummatootaa ta’u; (c) Oromiyaa walaba arguun “hawwii Oromoota harka caalanii” ta’uu ni fudhatu. Ha ta’u malee, keeyyata (paragraph) lamaan tokko booda ammoo “uummatni keenya Oromiyaa walaba taate fi mootummaa birmadummaa dhaabbachuuf murteessa jedhanii yaaduun ykn beekuun amma nama rakkisa” jedchuun yaada wal-mormu lafa nuuf kaa’an.
Itti fufuunis, haala walxaxa fi wareegama qaalii Oromiyaa walaboomsuun gaafatu sodaachuun Itoophiyaan “hundaafuu Haadha dhugaa” taatu yoo ijaaramte “Federeeshinii amma naannooleerratti hundaa’ee ijaaramee jiru kana gara Federeeshinii isa dhugaa ta’etti jijjiranii biyyattii tanas diigamuurraa oolchuutu silaa fala ture” jechuun furmaata nuuf akeekanii jiru.
Ani ammo, kan Oromoof wayyu qabasa’onni Oromoo hundi qabsoo biyya Walaba Oromiyaa ijaaruuf godhamu jala hiriiruudhan jedha.
Tokkoffaa, Itoophiyaa keessatti baroota dheeraaf walqixxuumaaf falamaa gochuuf dhiiga fi lafee ijoolee isaa qaqqaalii itti qisaase irraa muuxxannoo horate qaba. Jaarra tokkof qabsoon inni godhe Oromoon lafa isaa irraa buqqaafamuu hin dhaabinne! Hidhamnuu, ajjeefamnuu, dhiigin isaa dhangala’uun hin dhaabinne! Muxxannoon sochiilee addunyaa fi kan Oromoo irra horataman akka argisiisan: (a) Impaayera akka Itoophiyaa dimookratessuun ta’ee kan hin beeknne fi kan hin danda’amne; (b) kan danda’amu impaayericha diiguun ummatoota hidhaa isaa keessa jira hiikuun bilisummaa gonfachiisuu; ta’uu isaa ti.
Lammaffaa, Walabumma Oromiyaaf qabsaa’uun, yoo xinnaate, faaydaalee gud-guddoo sadii qaba. isaanis, (a) Yeroo qabsoon keessa tokkummaa nuu kenna; (b) Oromoon qabeenyasaa osoo alagaaf hin qoodin ittiin biyyasaa misoomsuu danda’a; (c) Oromiyaan walaboome fi sirnna gadaan buluu Gaanfa Afrikaaf, Habashoota dabalatee, fakkeenya gaarii ta’a.
Ummata waan baraabadu irratti yaada ititaa qabaatee, tokkummaan ijaaramee, hidhatee mirga isaa, keessattuu kan seera mootummoota gamtomaniin beekkame, falmate addunyaa gurraa kennuufiif dirqama. Qabsoon ummta Eritrea, Croatia, Bosna, fi kkf akka fakkeenyaatti dhihaachuu danda’u. Hamma nuti beeknutti, kan jabaatee falmatee, diinasaa injifate, addunyaan dura dhaabbatee mirga inni qabsoon argate sarbee hin beeku. Addunyaan, yeroo hedduu, kan jabaatee mirga qaama biraa fudhate yeroo ta’ee ilaalu mul’ata. Kanaaf, “addunyaan walabummaa Oromiyaa hin fudhatu” yaadin jedhu dogoggoraa fi kan haala addunya hin hubanne dha.Ummatin Oromoo yaada tokkoon walabummaa Oromiyaaf falmachuun yeroo qabsoo keessa tokkummaa nuu kenna; addunyaanillee akka nu dhaggeeffatu dirqa. Hundi waliigalee Oromiyaa walabaaf qabsaa’uun: (a) Yaada keenya bakka heedduutti faffaca’ee jiru gar-tokkotti luucessa, tokkummaa qabsoo nuu kenna; (b) Addadduumma diinni dhimma itti bahuun ballisuu fi nu gidduutti nokkoroo uumu xiqqeessa fkf: carraa dinnii QBO PDO Wayyaanee, PDO Amaaraa, Sabboontota goggogoo kannee haala addunyaa hinhubannee jechuun gargar nu hiree wal-irratti nu bobbaasuuf argatu xiqqeessa ; (c) Murtii fi sochiin keenya, osoo fedhii ummatoota biraan xaxama (complication) keessa hin galin, guutummaatti (completely, single mindedly) akka fedhii (interest) Oromoo irratti xiyyeeffannu nu gargaara.
Inni lammaffa, faaydaa Oromiyaa walaboomsuun walabummaa/bilisummaa booda qabu.Jaarraa tokko oliif bittaa alagaa jala turuun Oromoo seenaa isaa dhoksee, misooma afaan, adaa, qabeenya, artii, teknoology fi kkf isaa hedduu boodatti hanbisuun hamilee ummata Oromoo cabse jira. Jaarra tokko oliif qabeenyi Oromoo, afaan, aadaa, artii fi kkf habashootaa guddisuu irratti qisaasamaa ture. Kanaaf:
(a) Oromoon, yeroo itti bulchiinsa biyyaa fi aangoo politkaa irratti nokkoroo alagaa tokko malee, guddina fi badhaadhina mataa isaa irratti hojjetu isa barbaachisa. Habashoota aadaa dimookraasii hin qabnne wajjin biyya “multi Ethnic” ta’e keessa waliin bulu fi waliin bulchuun nokkoroo fi xaxama addaddaa ummuun yeroo silaa guddina fi badhaadhina Oromiyaa irra oolu nu jalaa balleessa. Fkf: Afaan Oromoo, afaan Amaraan dorgomuu; meeshaalee sab-qunnamtii irratti wal falmuu; sirna (curriculum) barnootaa irratti wal falmuu; imammata economy irratti wal-falmuu (e.g: land tenure); wealth distribution, taxation, equalization fi kkf. Oromiyaa walaboomsuun yeroo fi qabeenya nokkoroo ormaa wajjinii irratti qisaasnnu misooma ummata keenyaa irra akka oolchinu nu gargaara.
(b) Oromoon, yeroo itti qabeenya isaa osoo alagaa wajjin hin hirmaatin, misooma biyyaa isaa irra oolchuun booda hafiinsa kessa turuuf dirqame irraa dandamatu fi bayyaannatu isa barbaachisa. Har’a, Oromiyaan tajaajla ‘tax’ Oromiyaa keessa sassaabamu gitu mootummaa Federaala Itoophiyaa irraa argaachaa hin jiru. Kana jechuun, Oromiyaan, misooma saboota biraa ‘subsidize’ gochaa jira jechuu dha. Yoo walaboome garuu, qabeenya Isa kana gutummaatti misooma ummata isaa fi biyya isaa irra oolchuu danda’a.
Inni sadaffaa, Oromiayaan walaboome fi dimookraata’e garba irreen bulchitootaa keessatti baqqanaa dimookraasii (an island of democracy in a sea of dictatorship) ta’uun Gaanfa Afrikaaf bu’aa guddaa buusuu danda’a.Nannoo Itoophiyaa fi Gaanfa Afrikaa sanatti dimookraasii fiduun yeroo takkaan kan danda’amu miti – sadarkaa-sadarakaan sosso’uu barbaada. Ttoofttaa “divide and conquer” jedhutti fayyadamuu barbaachisa. Kana jechuun naanoo sanaa ummatta aadaan isaa dimookraasii beeku tokko dura dimookratessanii naannoo sanaaf fakkeenya gochuun jalqabuutu irra abdii qaba. Oromoon ummata akkasii ti: ummata hamma humnaan cabsamee Abyssinia jalatti kufetti sirnna fi aadaa dimookraasii qabaachaa fi ittin wal-bulchaa ture. Oromiyaan walaboome fi sirnna gadaan (akka haala yeroo wajjin deemutti kan ta’e) buluu jalqabe Gaanfa Afrikaaf, Habashoota dabalatee, fakkeenya gaarii ta’a. Kana amoo aadaa isaa waan qabuuf, ni danda’a! Gaanfa Afriikaa dimookraatessuun Oromiyaa irraa yoo jalqabe irra abdii qaba.
Dhalootin Oromoo sirnna Wayyaanee jalatti dhalate fi guddate (Dhaloota Qubee) fincila mul’ataa, kan ummata Oromootti hamilee horu fi boonsu, kan diina rifaasisu fi kan alagaa ajaa’ibsiisuu jalqabee jira. Kan dhimma kooti jedhee ilaaleef, alaaba Itoophiyaa osoo mirmirsanii hin mul’atan. Itoophiyaa keessatti wal-qixxumaa osoo gaafatanii hin dhagahaman. Gaaffii, dhaadannoo fi jiruun isaanii kan mul’isu ummata keenya biyya isaa irratti abbaa-biyyummaa gonfachiisuu dha – walabummaa Oromiyaa ti. Kanneen qabsoon kanatti du’aa jiran hoo “ni dadhabne” hin jennee; “Oromiyaa walaboomsuun hin danda’amu” hin jenne; “wareegamatu nutti baayyate” hin jennee; “Itoophiyaa hundaaf haadha taate barbaanna” hin jenne. Kanneen qabsoon kana fagoo irraa daawwatan maaliif wareegamin walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromoof kafalamu itti ulfaatee?
Oromiyaan ni walaboomtti.
6 thoughts on “Gaaffii Siyaasaa Oromoof Wayyu: Walabummaa Oromiyaa”
Akkan hubadhutti sii fi obbo Biraanuu Hundee jidduu garaa garummaa dhalootaatu (generation gap) tu Jira. Ati ilaalchaa fi fedhii dhaloota Qubee calaqqifte, jabeessitee gootummaa, ofitti amanamummaa fi phycology ‘nan-danda’aa’ dhaan guutamtee akka jirtu dhugaan siif baha. Anis ejjennoo fi kaayyoo akka kee waan deggeruuf.
Obbo Biraanuun dhaloota abbootii keenyaa warren karaa qabsoo nuuf saaqan garuu carraa qabsoo hunda akka gufuu fi rakkootti ilaalaa as gahanii fakkaatu. Dursanii yaada wal-xaxaan qabamanii kan danda’amu hin danda’amu jedhanii if amansiisanii, achii Oromoo amansiisuuf gaara dhiibu! Dhalooti ammaa ilaalcha habashaan waggoota dheeraaf ittiin nu bitaa turte of-harka galfatee akka jiru hin hubatin jiru. Dhalooti ammaa ilaalcha ‘winner psychology’ guutuutti hidhatee jira. Angaftooti akka obbo Biraanuu dhugaa Oromoo beekanii, dursee karaan dhugaan sun itti mul’atuyyuu ‘winner psychology’ waan hin qabneef, ‘I can do it’ kan jedhu waan dubbachuu hin dandeenyeef habashaan carraa baayyee isaan jalaa hattee, ilaalcha habashaa mo’uun rakkisaa ta’uu ammayyuu of keessaa baasuu hin dandeenye. Bara Transitional government sana filannoo yeroo geggeessan Obbo Leencoon bakka President/Prime Ministareer akka qabatan gaafatamnaan, ‘lakkii ani bakka ykn itti gaafatamummaa kanaaf qopha’aa miti’ jedhanii of irra dabarsan ykn didan. Mallasaan (cululleen) harkaa butate, maaliif? sababa yeros winner psychology dhaan o/Leencoo caaluuf; malee dandeettii addaa Leencoo irra qabaatee hin turre.
Ammas, furmaati jiru humna, qabeenyaa fi dandeettii Oromoo maraa gara Oromoo bilisoomsuu fi Oromiyaa walaboomsuutti xiyyeeffachuu qofatu Oromoof furmaata. Yaadi akka obbo Biraanuun dhiyeessan kun humna Oromoo hiruu, humna buusuuf yaaluu fi Oromoon garaa tokkoo fi ejjennaa tokkoon gara fuunduraatti akka hin adeemne yeroodhaaf danqaa ta’uu irraa kan hafe faayidaa tokkollee hin qabu. Sababi isaa Oromoo waa’ee faayidaa fi miidhaa unitary state barsiisuuf yaaluun warreen Itoophiyaa keessa hin jiranneef yoo tahe malee ummati Oromoo jaarraa tokko oliif abidda empayeraatiin waadamee qaammatamaa jira waan taheef. Empaayera sana keessa yeroo ammaa jiraachuun immoo caalaatti Oromoon maal akka fedhu deemanii ilaaluu wayya! Faayidaa Bilisummmaa fi walabummaa barsiisuu fi ilaalcha bilisummaa babal’isuun kanaafis haarsaan kamuu kaffalamu kasaaraa tokkollee akka hin qabne barsiisuun garuu baayyee barbaachisaadha, sababi isaa Oromoon jaarraa tokko oliif faayidaa Bilisummaa fi Walabummaa dhandhamuurraa addaan bahee harqoota gabrummaa jala waan jiraataa jiruuf. Akkasumas ilaalchi diiggaa (corrupt) kan akka obbo Biraanuun dhiyeessan kun humna Qeerroo Bilisummaa (dhaloota Qubee) keessa lo’ee akka hin galleef!!!!!
There are clear indications both from the main article and the above comment that you are the same person with different names. I can explain this with examples if you wish so. I am sure that you are LUUCCEE GURMUU who is commenting on his/her own article/opinion by using another name.
Having said that, if people have different opinions, it doesn’t automatically mean that they are in different generations. You just pretend to confuse others. From Obbo Berhanu Hundee’s article, I personally don’t see any conclusion that states independence Oromia is not a lasting solution. In my understanding, he rather tried to explain the difficulties and challenges to achieving walabummaa Oromiyaa.
For a simple reason that he expressed his concern, it is not fair to say his idea is corrupt. How can we discuss on such an important issue if you jump and want to attack people with different opinions?? The only difference I see between your and Obbo Berhanu’s opinion is that Obbo Berhanu didn’t put clearly in his article which political goal is better for Oromo. Come to your sense!!!
Can I call Berhanu just because you support Berhanu’s idea? I wouldn’t because I don’t see a clear indication that Hubata and Berhanu are the same people just like I don’t see a clear indication that Murata and Lucee are the same. Is Hubata your real name by the way? I am just asking to make a point but the important discussion we should have is on ideas not personalities.
You said “Berhanu didn’t put clearly in his article which political goal is better for Oromo”. This is not true, he clearly put it. The following is a direct quote from his article.
“Osoo akka yaada kiyyaa ta’ee, akka haala amma jiru fi rakkoolee biyyatti sana keessa jiraniif furmaatni waloo (common solution) Federeeshinii amma naannooleerratti hundaa’ee ijaaramee jiru kana gara Federeeshinii isa dhugaa ta’etti jijjiranii biyyattii tanas diigamuurraa oolchuutu silaa fala ture”. This should be crystal clear to everyone who can read and understand afaan Oromo.
I meant, can I call you Berhanu
Duraan dursee, barreeffama gabaabaa isaanii keessatti yaada bal’aa dhiheessuu fi furmaatni siyaasaa Oromoof wayyu isa kana jedhanii ifaa ifatti yaada isaani lafa kaawuu isaaniitiif Obboo/Aaddee Luuccee dhugumatti galatas ta’ee kabaja guddaan qabaaf. Yoo walqeeqan malee; yoo walsirreessan malee falas ta’ee mala argachuun hin danda’amu. Qeeqni ijaaraan (constructive criticism) guddinatti nama geessa malee nama hin miidhu. Ani akkanattan laala. Qeeqni dhugaarratti hundaa’ee, amansiisaa ta’e immoo fudhatamuus qaba jedheen amana.
Ergan kana jedhe booda, barreeffama Obboo/Aaddee Luuccee irratti QABXIILEE SADI ifa godhuun barbaada:
Tokkoffaa, wanti hubatamuu qabu, kaayyoon barreeffama kiyyaa dhimma baay’ee ulfaataa fi murteessaa ta’e kana akka laayyootti laalee qoosaaf barreessuu osoo hin taane, yaada kana mariitti dhiyeessuufi. Ka’umsi kiyyas Oromoof isa kana yookaan isa sana wayya jedhee jala sararuufii miti. Akkuman barreeffama kiyya sana keessatti ibsuu yaale, murtiis ta’ee filannoon kan uummata Oromoo bal’aa ti jedhee jira. Dhugaan jirus kanuma. Haa ta’u malee, ammas irran deebi’aa wareegamni walabummaa Oromiyaatiif kaffalames ta’ee kan kaffalamuuf deemu baay’ee ulfaataa akka ta’e fi ta’u waan dhara hin ta’iniif, hanga danda’ametti osoo wareegamni kun hir’ifamuu danda’ee wayya yaada jedhuufi. Yaada kiyya kana bu’ura godhachuudhaan, Obboo/Aaddee Luucceen akkan jedhu:
Dhugaa dha, qabsaa’otni dhugaa kan lubbuu isaanii ittidhaban, kan qaamni isaanii ittihir’ate, kan jiruun isanii diigame,… hin danda’amu hin jenne, hin jedhanis. Asirratti waliif galla. Haa ta’u malee,
“Kanneen qabsoo kana fagoo irraa daawwatan maaliif wareegamin walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromoof kafalamu itti ulfaatee?”
kan jedhuuf, kan alaala taa’ee waan tokko daawwatuuf wanti itti ulfaatu hin jiru. Wanti ulfaatu sun abbaa baatutti ulfaata malee kan taa’ee laalu ba’aa sanuu hin agarre. Waan ta’eef, nuti warri fagoo teenyee laallu maaloo wareegamni nutti ulfaatee waan salphaa nuuf wayya jechuu hin dandeenyu. Mirgas hamilees hin qabnu. Garuu, dubbiin akka makmaaksa Oromoo “HARKA OROMAATIIN IBIDDA QABUUN NAMA HIN DHIBU” akka hin taaneef jecha yoo danda’ame karaa wareegama ulfaataa hin kaffalchiifne yoo jiraate yaaluu wayyinaa laata yaada jedhurraa madde.
Lammffaa, Obboo/Aaddee Luucceen, mirga hiree murteeffannaa uummata keenyaa laalchisee yaada ani barreesse keessaa fudhatanii akkana jedhu:
“uummatni keenya Oromiyaa walaba taate fi mootummaa birmadummaa dhaabbachuuf murteessa jedhanii yaaduun ykn beekuun amma nama rakkisa” jedchuun yaada wal-mormu lafa nuuf kaa’an.
Kun yaada walmormu miti. Waanan jechuu barbaade irra deebi’een ibsuu yaala. Wanti hunduu amanuu danda’an jedhee yaadu, nuti har’a mirga hiree keenyaa murteeffachuuf baay’ee fagoo irraa jirra. Qabsoon wareegama ulfaataa kan gaafatuufuu isa kanaafi. Har’a as teenyee fagootti yoo laallu, tilmaama malee kana ta’a jennee jala sararuu hin dandeenyu. Tarii mirgi hiree murteeffannaa sunuu mirkanaa’ee, uummatni keenya murtiirra kan gahu yoo ta’e, ittibahinsa (outcome) murtii sanaa har’a beekuu hin dandeenyu. Kan nuti eegnuu ala ta’uu mala. Asirraa ka’een “…murtii godhamuuf deemu kana keessatti uummatni keenya Oromiyaa walaba taate fi mootummaa birmadummaa dhaabbachuuf murteessa jedhanii yaaduun ykn beekuun amma nama rakkisa.” jedhe malee kun hawwii/abjuu ykn fedhii uummata Oromoo ta’uu hin danda’u jechuuf akka hin taane hubatamuu qaba.
Safdaffaa, kan biraa yaadni Obboo/Aaddee Luuccoon barreeffama kiyya keessaa fuudhanii lafa kaayan isa kana.
“Itti fufuunis, haala walxaxa fi wareegama qaalii Oromiyaa walaboomsuun gaafatu sodaachuun Itoophiyaan “hundaafuu Haadha dhugaa” taatu yoo ijaaramte “Federeeshinii amma naannooleerratti hundaa’ee ijaaramee jiru kana gara Federeeshinii isa dhugaa ta’etti jijjiranii biyyattii tanas diigamuurraa oolchuutu silaa fala ture” jechuun furmaata nuuf akeekanii jiru.”
Kan Obboo/Aaddee Luucceen asitti dhiheessanii fi kan ani barreess addaa addummaa qaba. Kan asitti kenname kun keeyyatoota gara garaa keessa walittifidame. Tokkoffaa, ani barreeffama kiyya keessatti yaaddoon qaburraa ka’ee karaan wareegama salphisuu danda’u kana ta’uu danda’inaa laata jechuuf malee, bakkee tokkottuu kun ykn sun ni wayya jedhee jala sararee akka FURMAATAAtti lafa kaa’e hin jiru. Itoophiyaa ilmaan Oromootiif mana hidhaa taate tanas diigamuurraa oolchuu wayya jedhaa ishiidhaaf quuqamee wantan ibse hin qabu.
biyyattii tanas diigamuurraa oolchuutu silaa fala ture” jechuun furmaata nuuf akeekanii jiru.”
kan jedhu kun keeyyata barreeffama kiyyaa isa dhumaa keessaa fudhatame. Innis ergan humnoota siyaasaa biyyattii sanaa garee shanitti hiree ibse booda kan silaa hundaafuu furmaata waloo ta’uu danda’u isa kana ture jechuuf malee; furmaatni Oromoof wayyu isa kana jedhee FURMAATA XUMURAA (lasting solution) agarsiisuufii miti.
Dubbistootni irra deebi’anii akka hubatan keeyyatni xumuraa barreeffama kiyyaa sun akkan ture:
“Egaa, humnoota gara garaa kan kaayyoos ta’ee galii waliin deemuu hindandeenye qabatanii jiran kana, walitti fidanii kaayyoo ykn/fi galii waloo tokkorratti akka waliif galan taasisuun baay’ee ulfaataa ta’a jedheen yaada. Osoo akka yaada kiyyaa ta’ee, akka haala amma jiru fi rakkoolee biyyatti sana keessa jiraniif furmaatni waloo (common solution) Federeeshinii amma naannooleerratti hundaa’ee ijaaramee jiru kana gara Federeeshinii isa dhugaa ta’etti jijjiranii biyyattii tanas diigamuurraa oolchuutu silaa fala ture. Yoon akkana jedhu, kun filannoo uummattootaa/sabootaa ta’uu qaba jechuu kiyya osoo hin taane, kaayyoo akkanaatu silaa hundaafuu waan jiddugalaa tokkoo ta’uu mala jechuu kooti. Filannoo uummattootaa/sabootaa laalchisee garuu waa hundaa murteessuu kana qabu uummata bal’aa dha. Murtiis ta’ee injifannoon xumuraa kan uummata bal’aa akka ta’u shakkiin hin jiru.”
Egaa barreeffama kana xumuruuf, Obboo/Aaddee Luucee Gurmuu yaadas ta’ee qeeqa ykn komii dhiyeessaniif akkasumas furmaatni wayyu isa kana jedhanii ifaa ifatti lafa kaayuu isaaniitiif irra deebi’ee galateeffachaa; dhugaa dubbachuuf walis qeeqaa walis jabeessaa akkanatti waliin deemuun tarkaanfii tokko gara fuunduraatti nu oofa jedheen amana. Mariin kun ittifufuu qaba. Yaada keessan ibsachuuf hin sodaatinaa ykn of hin qusatinaa. Yoo yaada adda addaa burqisiisan malee furmaata tokko argachuun hin danda’amu. “Brainstorming” jettii mitii Faranjiin??!!
Injifannoon xumuraa kan uummata Oromoo akka ta’u shakkiin takkallee hin jirtu.
Berhanu Hundee aka Hubataa,
Do you see how my point is correct? You came with a pen name ‘Hubata’ by wrongly assuming that I am Luuccee and pretended as if you are a different person; and tried make different persons as one person simply because I opposed your idea and supported Luuccee’s. You didn’t address my concerns and views regarding the difference in the generation gap in Oromo leadership. You rather jumped to judge and attack based on the wrong judgment. We all in the new generation category share the same view and outlook as far as the destiny of Oromo and Oromia is concerned. We don’t want to negotiate with any party on Oromo interest. Oromiyaan Bilisoomuun abadan dirqiidha! Isin warri ilaalcha Itoophiya suphuu /reform/ gochuu feetan, yoo adeemsa keessan yeroon hin sirreeyfanne, carraan keessan warruma habashoota fi TPLF amma Oromoo lafarraa duguugaa jiruu fi sirna empaayeraa salgiitii Oromoo irra tursuuf yaalii gatii hin baafne gochaa jiran waliin dhiiga Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi WBOtiin murta’a!!!!! Kalaas!
The other point is that, the way you points are weird. This is another indicator that you don’t have a clear stand on what you believe in. You (Hubataa/Berhanu) pretend as if the other self of you (Berhanu/Hubataa) did not suggest any Political goal for Oromo when clearly advise us to embark on he road that that reduces sacrifice.
Gabrummaa jalaa bahuuf haarsaan guddatu hin jiru! Haarsaan hagi fedhe baafamu/kafalamu, haga Oromoon Bilisoomee Oromiyaan walaboomutti kasaaraa takkallee hin qabu! Haarsaa kaayyoof kafalamaa jiru waan taheef! Osoo akka ilaalcha keessanitii Oromoo yaadaan wal atakaaraa diina jalatti umrii gabrummaa dheerysa turte. Yaa ta’u malee, gootummaa dhaloota Qubee tiin haarsaa dhiigaa kan addunyaa dinqisiisee harka qullaa Agaazii isa haga funyaaniitti hidhatee jiru gootummaan adda itti kennanii SEENAA Oromoo bu’uuratti jijjiiruu danda’aniiru!
Kan irraa waan guddaa barachuu qabdu turtan! Osoo akka keessanii Wayyaanee humni kuffisu ykn dura dhaabbatu hin jiru tureeyi. Kanaaf, empaayera sana diiguun hin danda’amu jechaa haftu turtan. Amma garuu Qeerroon hojjaan akka Wayyaaneen kufuu dandeessuu fi qabdu agarsiifnaan, ejjennoo keessan isa Impayera Itophiyaa diiguun hin danda’amu jedhu jijjiirtanii gara Bilisummaan Oromoo haarsaa qaalii/hamaa Oromoo akka baasisuuf adeemu sodaachisuutti falasama eegalame fakkaata.